Shiinaha oxide birta huruud ah 311/313/920 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midabka Shencai
1. Midabka huruudda ah ee birta (Iron Oxide) waxaa si toos ah loogu mariyaa sibidhka sida midabka ama midabka midabka precast iyo alaabada dhismaha ee walxaha shubka ah. Meelo kala duwan oo dusha sare ka samaysan oo midabbada gudaha iyo dibedda ah, sida derbiyada, sagxadaha, saqafyada, tiirarka, balbalooyinka, waddooyinka, meelaha baabuurta la dhigto, jaranjarooyinka, saldhigyada, iwm., Sida lebenka wejiga, lebenka dhulka, saqafka saqafka, looxyada, dusiyeen, marmar macmal ah iyo wixii la mid ah. 2. Midabka hurdiga ah ee birta ah wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada midabaynta rinjiga iyo walxaha ilaalinta, oo ay ku jiraan biyo-ku-saleynta gudaha iyo dibedda derbiyada, maaddada budada ah, iwm. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa rinjiga toy, rinjiga qurxinta, rinjiga alaabta guriga, rinjiga electrophoretic iyo Dhaldhalaalka Midabbada huruudda ah ee 'Iron Oxide' waxay ku habboon tahay midabaynta waxyaabaha caagga ka sameysan, sida polymer-ka heerkulka sare iyo Thermoplastic, iyo badeecooyinka caagga ah, sida tuubooyinka gudaha ee baabuurta, tuubooyinka gudaha ee diyaaradaha, dhuumaha gudaha ee baaskiilka, iwm. 4. Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay dhismaha marmar macmal ah, terrazzo midabaynta. Midab-biyoodka, midabka saliidda, ranjiga, cinjirka iyo midabbada kale. Waxaa loo adeegsaday dhexdhexaad dhexdhexaad ah maadooyinka oksaydhka birta ah, sida samaynta birta oksaydh cas, birta madow, iwm. Intaa waxaa dheer, midabka huruudda ah ee birta ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dhammaan noocyada isku-qurxinta, warqadda, midabaynta maqaarka.
"SHENMING" brand synthetic pigment pigment iron oxide yellow 313 waxay ku raaxeysataa sumcadda suuqa sare wax soo saarka si fiican ayaa loogu iibiyaa waddanka oo dhan.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ka iibsato midab tayo sare leh midabka birta ah ee oksaydhka jaallaha ah 313 ee Shiinaha, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FACTORY ayaa ah xulashadaada ugu fiican.
Magaca Ganacsiga IRON OXIDE JAAL
Tusmada midabka Midabka huruud42 (77492)
CAS Maya / lambar No. 20344-49-4 / 243-746-4
Sooc Tusmada (Fe2O3) % .86
Nuugista saliida ml / 100g 25 ~ 35
qiimaha pH 3 ~ 7
Culeys gaar ah g / cm3 4.1
Xirmooyinka iibka Boorsada 25kg / 600kg bacda bulk ka dibna palletized
Hore: birta xabagta cas 110/120/130/180/190
Xiga: Iron oxide madow 722/750